Mareykanka oo duqeyn ku diley Janeraal katirsan ciidanka Iiraan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo duqeyn ku diley Janeraal katirsan ciidanka Iiraan
Ardaan Yare 3 January 2020
Madaxii Ciidamada xulka ah ee Quds Force ee Iran, General Qassem Soleimani, ayaa aroortii hore ee subaxnimadan jimcaha ah lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Magaalada Baqdaad, sida ay sheegeen Saraakiisha Ciraaq.
Abu Mahdi al-Muhandis, oo ahaa taliye ku-xigeenkii Maleeshiyaadka Ciraaq ee ay taageerayaan Iran ee Ciidamada Dhaqdhaqaaqa Caanka ee Ciraaq, ayaa sidoo kale la dilay.
Cidina ma sheegan mas’uuliyadda weerarka mana jirto faahfaahin kale oo xilligan la helayo.
Qudus waa unug ka mid ah Ilaalada Kacaanka Iran. Shaqadeeda ugu weynina waa inay ka fuliso hawlgal militari meel ka baxsan dalka Iran.
Ciidamada Dhaqdhaqaaqa Caanka ah ee Ciraaq waxay xiriir dhow la leeyihiin Iran waxayna ka dambeeyeen weerarkii Talaadadii lagu qaaday safaaradda Mareykanka ee Baqdaad.
Somalis protest against deadly Al Shabaab bombing
Kheyre oo la kulmay qaar kamid ah Odayaasha Dhaqanka Galmudug